Izay tsy fantatrao momba ny JAWS an'ny Universal ny Ride
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Famerenana ny JAWS an'ny Universal the Ride
Famerenana ny JAWS an'ny Universal the Ride
by Piper St. James Jona 24, 2017
nosoratan'i Piper St. James Jona 24, 2017
Vao 5 taona monja ny valanorano nikatona ny Universal Studios Florida dia nikatona, fa ho an'ny ankamaroantsika mpankafy dia lava kokoa ny fahatsapany. Nolazain'izy ireo taminay fa ny "hanome toerana ho an'ny traikefa nahafinaritra sy vaovao" dia hisolo ny dia izay nisy fanokafana 22 taona tamin'ny fahavaratry ny taona 1990, fa ho an'ny maro amintsika dia tsy azonao atao ny mameno izany fanaintainana izany ao am-ponay .
Eny ary, raha ny fanazavana, io dia mitaingina vaovao sy manaitaitra io no dingana faharoa tamin'izy ireo Harry Potter manintona, Diagon Alley. Azoko tsara ny safidin'izy ireo. Manintona olona maro kokoa sy mpanera ny tanora izy io, raha tsy hilaza afa-tsy ny fotoana tsy azo araraotin'ny varotra, fa ny zavatra sasany izay tsy afangaroo fotsiny. Ka andao hotadidintsika ny fandehanana any amin'ny sarimihetsika ankafizintsika, sa tsy izany?
Ka, ny mampihomehy, toy ny sarimihetsika ihany valanorano ny mitaingina fiara dia nanana fahasimbana maro samirery. Nandeha ny tetibola, tsy niasa ny antsantsa, ary tapaka ny fotoana rehetra; fa ho tonga amin'izany isika avy eo.
Ny fitsangantsanganana maro amintsika dia mahatadidy, ao anatin'izany ny tenako, dia tsy ilay Jaws tany am-boalohany namboarina tao amin'ny valan-javaboary Florida. Mitentina 30 tapitrisa dolara dolara amerikana ny andiany voalohany amin'ny familiana! Mampalahelo fa nanana olana ara-teknika be dia be izy ireo ary nakaton'izy ireo hanarenana fotoana fohy taorian'ny fisokafany. Toa tsy nijanona tao amin'ny ranon'i Martha's Vineyard ilay ozona naterak'i Bruce ilay antsantsa, izay nakana sary an-tsaina ny kilasika tamin'ny 1975 fa koa nanenjika ilay lehilahy vita amin'ny lagoon an'i Orlando koa.
Ny foto-kevitra tany am-boalohany dia ny hahatongavan'ireo mpizahatany mitaingina sambo kely kely sy tsy mendrika an-dranomasina noho ny sambon-dian'ny olona 48 fantatsika ankehitriny, ary amin'ny faritra manokana amin'ny farihy Jaws dia mahazo sambo amin'ny nifiny! Rehefa avy nihazona ny sambo ny antsantsa dia nilomano nanodidina ny lagoon niaraka tamin'ny sambo tao anatiny, tsara, valanoranony, 20 metatra isan-tsegondra.
Azo antoka fa tsara amin'ny feo izy io, fa ny mpitantana MCA teo aloha izay tsy nitonona anarana dia nilaza fa “nofy ratsy i Jaws…” Rehefa nihazona ptoon-tsambo i Jaws niaraka tamin'ny nifiny antsantsa TENA niraikitra tao am-bavany dia tena hotriariny izany; tsy ampahany amin'ilay script izany. Indraindray izy natory teo am-pototry ny lagoon rehefa nasaina nilentika izy, tamin'ny endriny tena izy Bruce. Ny iray amin'ireo olana lehibe kokoa dia ny fampiakarana ny antsantsa haingam-pandeha satria ny rano dia namorona dragona izay nampiadana azy.
Lahatsary an'ny dian'ny Jaws tany am-boalohany.
Amin'ny famaranana lehibe voalohany dia nandefa grenady tao am-bavan'ny antsantsa mpamono olona ilay mpisambotra rehefa nilentika tany ambanin'ny rano sy BOOM! Tapa-kena hena sy "rà" kely dia ho voatifitra folo metatra ho any amin'ny rivotra! Na dia tsara aza izany rehetra izany dia tsy nisy izany.
Sarotra ny nahazo ny fotoanan'ny sambo sy ny antsantsa. Raha tsy teo amin'ny fotoanany ilay antsantsa dia niaina ho zava-mahadomelina ny traikefa nahatsiravina, niaraka tamin'izay tsy nety niparitaka teny akaikin'ny sambo i Jaws. Miaraka amin'ny olana ara-teknika miampy isan'andro dia nanapa-kevitra ihany i Universal fa hanidy ny manintona roa volana sy tapany monja taorian'ny lanonana fanapahana tadiny. Telo taona taty aoriana vao nipoitra indray i Jaws noho ny valifaty nataony.
Ao amin'ny kinova vaovao amin'ny fandehanana ireo sambo kely, nisambotra sambo i Jaws ary nitaritarika azy nanodidina ny farihy, ary koa ny fiafaran'ny antsantsa nipoaka niaraka tamin'ny rà sy ny hena antsa dia nofoanana avokoa. Raha tokony ho izy dia naka singa bebe kokoa tamin'ny fizarana voalohany sy faharoa tamin'ny andiany izy ireo ary nampiditra azy ireo tao amin'ny script vaovao. Ho an'ny "wow factor" dia hasiana afo ny farany miaraka amin'ny tsipika gasikara voajanahary anaty rano.
Na dia tamin'ny 1993 aza ny fisokafana tamin'ny fomba ofisialy, dia vao tamin'ny fiandohan'ny taona 1994 vao nisokatra ho an'ny besinimaro ny dia. Ny ekipazy ao amin'ny Universal dia nianatra tamin'ny hadisoany ary nanokana fotoana bebe kokoa hanaovana fitiliana, famerenana ary famonoana kinks. Tamin'ity indray mitoraka ity rehefa nosokafana ho an'ny besinimaro ny dia Steven Spielberg dia niaraka tamin'ny kintan'ny sarimihetsika Roy Scheider sy Lorraine Gary; lanonana fanapahana kofehy tsara raha manontany ahy ianao.
Ny mitaingina vaovao dia anao mitaingina sambo fitsangatsanganana olona 48 olona hijerena ny fahitana mahafinaritra ao amin'ny seranan'i Amity rehefa nilazana ny fanafihana antsantsa tamin'ny 1974 ianao ary nitsidika ireo toerana nanafihana. Ho hitanao ireo marika famantarana amin'ny sarimihetsika voalohany toy ny tranon'i Chief Martin Brody ary koa ny Ben'ny tanàna Larry Vaughn. Tampoka teo dia nisy antso nampihetsi-po tonga tao amin'ny radio nisy ilay sambo avy amina mpitari-dia iray hafa izay nivadika hiaka ary avy eo rivotra maty. Rehefa mihodinkodina eo an-jorony ny sambonao dia hitanao ny sisa amin'ny sambo fitsangantsanganana rehefa milentika ao ambanin'ny rano izy. Io no rehefa hitanao ny vodin-tsavony amin'ny skim fotsy lehibe eo ambonin'ny rano.
Mandalo eo ambanin'ny sambonao ny vombony, manetsiketsika azy. Rehefa avy nitifitra ny mpandefa grenady imbetsaka ary tsy hita isaky ny nanapa-kevitra ny mpitsoa-ponenana fa hialokaloka ao amin'ny sambo ary hiandry ny famerenan'ny Chief Brody. Avy eo ny antsantsa dia manomboka mirohondrohona ao anaty sambo ary farany mamaky ny rindrina ary mamaky ny rano ho hitan'ny mpizahatany voalohany.
Haingam-pandeha ilay mpitsambikina fa manenjika ny antsantsa ary mivoaka avy ao anaty rano indray ny sambo.
Rehefa mandefa grenady iray hafa ny mpitifitra dia tsy nahatratra ilay antsantsa indray izy, tamin'ity indray mitoraka ity dia nahatratra tankina solika teo akaiky teo tao amin'ny Gas Dock an'i Bridewell izay nipoaka ary nanakaiky loatra noho ny fampiononana ho an'ireo mpandeha, saingy tafavoaka ny afo izy ireo.
Tahaka ny fiezahan'ny sambo hisintona amina seranana trondro tranainy amin'ny alàlan'ny sambo mpitondra herinaratra avo mba hampidina ny mpandeha hiaro ny zava-miseho ary hisosa mankany amin'ny sambo izy. Mipoitra ny valanoranony ho amin'ny famonoana olona fa raha tokony hanaikitra ny mpandeha dia mahazo tariby taribin'ny herinaratra anaty rano avy amin'ny sambo mpifanila vodirindrina aminy ary mandeha amin'ny herinaratra. Raha vao manala ny setroka misy setroka ny sisan'ny antsantsa dia toa manandrana manafika farany ny sambo, saingy farany ny tifitra farany nataon'ny kapiten'ilay basy dia nahitana ilay famonoana ilay antsantsa fotsy lehibe.
Na eo aza ny fahombiazan'ny diany voalohany ary ny fahombiazany tsy tapaka taorian'izay dia nanomboka nilatsaka ho an'ny Universal Studios Florida ary koa ny zaridainany faharoa Island of Adventure tamin'ny voalohan'ny taona 2000. Niova ny onja avy eo tamin'ny 2010 rehefa nisokatra ny Wizarding World of Harry Potter tamin'ny 2010 tao amin'ny Island of Adventure Park. Nisondrotra ny mpanatrika ary nahita fambara dolara ireo mpanatanteraka iraisam-pirenena. Na izany aza, ny dolara dia toa nandeha malalaka kokoa tao amin'ny zaridainany faharoa. Universal Studios Florida dia nilatsaka 20% ambanin'ny nakan'ny zaridainan'ny rahalahiny, ka nitranga ny tsy azo ihodivirana. Tamin'ny 2011 dia nambara fa hanakatona i Jaws mba "hanome toerana ho an'ny traikefa mahafinaritra, vaovao" fantatsika rehetra izao fa ny fisarihana Harry Potter faharoa izay nisokatra tamin'ny 2014, Diagon Alley.
Ho anao izay mbola tsy nahatsapa ny fientanam-po noho ny fanenjehan'ny lehilahy goavambe nihinana antsantsa dia azonao atao ny miloka amin'ny horonan-tsary tsy tambo isaina ao amin'ny youtube. Ary ho anao izay tena mila miaina ny dia ho anao mba hahavitany ny fiainanao, na ho anao izay tsy te hiaina indray, io dia io ihany no namboarina tao Universal Studios Japan!
Toy ny sarimihetsika ihany, ny manintona an'i Jaws dia nahazo sangan'asa kilalao mahazatra tamin'ny fahatsiarovana ireo mpitsidika izay nanam-bintana niaina ilay dia. Ny fiainana ny teny filamatra Universal momba ny “Ride the Movie” tamin'ny 1990 dia azo antoka fa nahatonga anao hahatsapa ho anisan'ny Amity sy antsantsa izay nihaza ny ranony ianao, ary traikefa tsy hohadinoiko velively; nohalalina noho ny nostalgia sy ny fitiavako antsantsa izay tsy te-hiara-miasa velively raha tokony.
Ilay mitaingina araka ny fantantsika aorian'ny fisarihana indray.
valanoranoJaws RideSteven SpielbergUniversal Studios Florida
iHorror Exclusive: Ny talen'ny Greg McLean dia manondro antsika amin'ny “The Belko Experiment”
Episoditra telo voalohany amin'ny zavona no misy an-tserasera izao